टिटलिस, यूरोपमा सब भन्दा अग्लो र सबैभन्दा उत्तम निलम्बन ब्रिज | यात्रा समाचार
टिटलिस, यूरोपमा सब भन्दा अग्लो र सबैभन्दा उत्तम निलम्बन पुल
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, स्विट्जरल्याण्ड
स्विजरल्याण्ड एक देश हो जुन हामी वर्षभरि हेर्न सक्दछौं। यसको ताल परिदृश्य जाडोको खेलको लागि वा तातो चकलेटको मजा लिन महान छ, तर गर्मी पर्यटनको लागि पनि राम्रो समय हो।
हिमाल, हिमनदी, ताल, वन, गाउँहरू र काल्पनिक शहरहरू। सबै यसलाई मिलाउन जोडीएको छ युरोप मा एक शीर्ष गन्तव्यहरू। त्यहाँ ती मानिसहरु छन् जसले आफ्ना मुल्यहरुका बारेमा गुनासो गर्छन् तर हामीलाई थाहा छ कि केहि बेवास्ता गरी यात्री यात्रीले केही पनि रोक्दैन, त्यसैले सस्तोका लागि सँधै तरिकाहरू छन्। मा एक dizzying वृद्धि को लागी सबै टिटलिस, यूरोपमा सब भन्दा बढी निलम्बन पुल!
2 टाइटलिस क्लिफ वाक
यो ए को नाम हो उरी आल्प्स पहाड जुन ठीक बर्न र ओब्वाल्देनको शिविरहरूको बीच सिमानामा अवस्थित छ र वरपर छ उचाईको 3200२०० मिटर। एन्जलबर्गबाट ​​ओब्वाल्डेन क्यान्टोनपट्टि पहुँच गरिएको छ, १ th औं शताब्दीमा पर्यटन बृद्धि भएदेखि बढि लोकप्रिय हिउँद र गर्मी रिसोर्ट।
एन्जलबर्ग मध्य स्विजरल्याण्डको लोकप्रिय अल्पाइन गाउँ हो र यसको शताब्दीयौं प्रसिद्धि बेनेडिक्टिन अबेले बनाएको कारण हो। यदि तपाईं Lucerne मा हुनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो निकट र धेरै पहुँचयोग्य छ। टिटलिस माउन्टेन गाउँको दक्षिण दिशामा र माथिको क्याबलवेबाट पुग्न सकिन्छ जुन टाइटलस बर्गाहनेनको अंश हो.
यस केबलवेले अस्तित्वको शीर्षक दिन्छ संसारको पहिलो घुमाउने केबलवे एन्जलबर्गलाई शीर्षमा जोड्दै र तीन स्थानमा रोकिन्छ विभिन्न उचाइहरूमा: १२1262२ मिटर, १1796 2428 and र २XNUMX२XNUMX मिटर अग्लो।
अन्तिम खण्ड द्वारा प्रदान गरिएको विचारहरू शानदार छन् किनकि केबलवे हिमनदी माथि उडान र वास्तवमा, एकचोटि एक पटक, तपाईं गर्न सक्नुहुने एउटा हिमनदी बरफ गुफामा यात्रा गर्नु हो जुन यसको पसल र रेस्टुरेन्टहरूको साथ स्टेशनको छेउमा छ। हिमालको शिखरमा सदा हिउँ रहन्छ त्यसैले यो सँधै चिसो हुन्छ र त्यहाँ सधै हिउँ रहन्छ अझै गर्मीमा।
टाइटलिस क्लिफ वाक
जसरी यो पोस्टको शीर्षकमा भन्छ, यो विश्वमा सब भन्दा माथि निलम्बन पुल हो। यो २०१२ मा लगभग तीन हजार मिटरको उचाईमा निर्माण गरिएको थियो र लगभग सय मिटरको दूरी पार गर्दछ। यसको चौड़ाई? यो मिटर चौडा छैन ताकि सवारी अधिक प्रभावशाली बनाउँछ।
औपचारिक उद्घाटन डिसेम्बर २०१२ मा थियो, हिउँ तूफान दिन, त्यसैले आमन्त्रित गरिएको धेरै यूरोपीय देशका अधिकारीहरु चिसोको कारण मरे र घटनामा थोरै देख्न सके। भोलिपल्ट सबै साहसी पर्यटकहरूले पुलमा पहुँच गरे। अब वसन्त र गर्मी त्यहाँ बाट आउँदैछ, स्पष्ट र स्पष्ट दिन, तपाईं तल हिमनदी देख्न सक्नुहुन्छ 460 मीटर तल र आँखा तीखा, दूरी मा इटाली।
ईन्जिनियरहरूले यसलाई शक्तिशाली बतास र धेरै टन संचित हिउँको प्रतिरोध गर्न डिजाइन गरे। यो पुल एक मुख्य पर्यटक आकर्षण बन्ने को स्पष्ट लक्ष्य संग पाँच महिना मा निर्माण गरीएको थियो। यसैले बमवर्षक शीर्षकहरू «विश्वमा सब भन्दा बढी निलम्बन पुल» वा most सबै भन्दा एड्रेनालाईनको साथ सवारी ». यसलाई पार गर्न १ 150० पाइलाहरू हिंड्नु पर्छ.
पैदल लिंक गर्दछ आइस फ्लायर चरिफ्ट स्टेशन संग। यी शानदार चरिलीफ्टहरू के हुन् तिनीहरूले तपाईंलाई हिमनदी र यसको दस मिटर गहिरो क्रेवासेसमा ढुवानी गर्छन्। यदि तपाइँ ग्रीष्म youतुमा जानुहुन्छ भने उनीहरूको साथ ग्लेशियर पार्कको टोबोगन रन पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईं जाडोमा जानुहुन्छ भने आफ्नो स्की नबिर्सनुहोस्।
यहाँ वरिपरि घुम्नको लागि के मूल्यहरू छन्? एन्जलबर्ग र टाइटलिस बीचको केबलवे सवारीको लागत Sw २ स्विस फ्र्यांक र आइस फ्लायर कुर्सी लिफ्टको लागत १२ स्विस फ्रैंक छ।। तपाईं सस्तो मूल्य पाउनुहुन्छ यदि तपाईंसँग एन्जलबर्ग गेस्ट कार्ड र यूरेल वा इंट्राइल पास तपाईंको हातमा छ भने। यसको अंशको लागि, त्यहाँ टाटलिस घुमाउने गोंडोला वा टाइटलिस रोटेयर पनि छ, यो-360० डिग्री घुमाउँछ पाँच मिनेटको यात्रामा चट्टान, घाटी र हिउँ र टाढाका चुचुरोहरूको दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
La हिमनदी गुफा यो केकमा आईसिंग छ किनभने यो टाइटलिस माउन्टेनको मुटु हो। यसको बरफ निकै पुरानो हो र विज्ञहरूको भनाइ अनुसार यो ऐतिहासिक क्षणको पूर्वानुमान गर्दछ जसमा मानिसहरूले आगो भेट्टाए। यो १ 150० मिटर लामो छ र त्यहाँ २० मिटर तल पनि विभिन्न दिशामा हिड्ने बाटोहरू छन्। यो गहिरो निलो छ, किनकि प्रकाशको परावर्तनको कारण, र हामीले सुरुमा भनेझैं यो चिसो छ त्यसैले ० डिग्री तल तापक्रमको आशा गर्नुहोस्। तिमी त्यहाँ कसरी पुग्छौ? टाईटलिस रोटेयर स्टेशनबाट एउटा कोरीडोर डाउन र सबै भन्दा राम्रो हो गुफामा प्रवेश पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ।
टाइटलिस ग्लेशियर पार्क सबै बर्ष खुला रहन्छ र तपाईं यसको ट्र्याकहरू फ्रेटको साथ रंगीन टायरमा सम्मिलित गर्न सक्नुहुनेछ। एक पालो जुन दिइयो! यो सम्झन लायक छ प्रवेश पनि निःशुल्क छ। के नि: शुल्क छैन तर धेरै व्यक्तिहरूले खुसीसाथ भुक्तानी गर्छन् त्यो हो विशिष्ट स्विस वेशभूषाको साथ फोटोशूट जुन त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ (त्यहाँ काउव्वय, भिन्टेज र स्की पोशाकहरूको अभाव छैन)।
कपडा हामीले लगाउने कपडामा छिटो राख्नको लागि डिजाइन गरिएको छ, र फोटो भनेको रमाईलो पोस्टकार्ड हो जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न: तपाईंको साथीहरू, टिटलिस माउन्टेन र तपाईं त्यो विशिष्ट खुशीयाली यात्री मुस्कानको साथ। फोटो-पोस्टकार्ड तीन मिनेटमा तयार छ र तपाईं यसलाई चार आकारहरूमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ: १ x x १ cm सेमी, २० x cm० सेमी, x० x cm 13 सेमी र x० x 18० सेमी। मूल्यहरु? , 20,,,, and and र ११30 CHF क्रमशः।
तपाईं आइस फ्लायरमा फोटो वा टाइटलिस क्लिफ वाकमा फोटो पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। रमाईलो गतिविधि र टिटलिस र यसको सस्पेंशन ब्रिजको माध्यमबाट हाम्रो मार्गको स्मृतिको रूपमा यो खराब विचार होईन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » स्विट्जरल्याण्ड » टिटलिस, यूरोपमा सब भन्दा अग्लो र सबैभन्दा उत्तम निलम्बन पुल
प्राडो संग्रहालयमा अमेरिकाको हिस्पैनिक सोसाइटीको खजाना